YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, February 17
ကမောက် ကမ တွေ များ လွန်း နေ လို့ (အေဇော်ကြီး)
ဒီ ရက်ပိုင်း မြင်ရ ကြားရတာ၊ က မောက် က မ ပါ ဗျာ။ သတင်း ဆွေးနွေးခြင်း ထရက် မှာ
သတင်းဖတ်သူ တဦး ကွန်မင့် ပေးထား တာ ဖတ် ရ ပါ တယ်။ အခု ရက်ပိုင်း ကျူးပစ် သတင်း
ထရက် တွေ ထဲ သတင်းတွေ ဖတ် ရ တာ ကမောက် ကမ နဲ့ အဆင့်အတန်း နိမ့် လာတယ်
လို့ သူ က ဆို ပါ တယ် ။ ဟုတ် ပါ တယ် ၊ တကယ်တော့ ဖတ် ရ တဲ့ သတင်း တွေ က
ကမောက် ကမ ဖြစ် ရ တာ က ၊ ဖြစ် နေ တဲ့ အခြေ အနေ အမှန် တွေ က လဲ ၊
က လဲ ကမောက် ကမ တွေ များ လွန်း နေ လို့ ပါ။
အခုဘဲ ကြည့် လေ ၊ ဒီ လေး ငါးရက် အတွင်း ငွေမာဈေး ၊ ရွှေ ဈေး တွေ အတက် အကျ ကြမ်း
လိုက် ကြ တာ တကယ့် ကို ကမောက် ကမ ပါ ဘဲ ၊ လူ တွေ ဆိုတာ ယောက် ယက် ကို ခတ်
နေ ကြ ပါ တယ်။ ရှိ တဲ့ ပိုက် ဆံ လေး တွေ ကြွပ် ကြွပ် အိတ် လေး တွေ နဲ့ ၊ ဒေါ်လာ
ရောင်း တဲ့ ဆိုင် တို့ ၊ ရွှေ ဆိုင် တို့ မှာ ကြိတ် ကြိတ် တိုး ပေါ့ ဗျာ။
ငွေ မာ အသုံး လို လို့ ၊ ရွှေ အထည် ဝတ် ဘို့ လို လို့ တော့ ၊မဟုတ် ရ ပါ ဗျာ ၊ ကမောက်
ကမ သတင်း တွေ ဟို ကြား ဒီ ကြား နဲ့ ၊ ကိုယ့် ရှိ တဲ့ ဖွတ် ကလိ ဒင်္ဂါးလေး ၊ ပွန်းပြီး
ပါး မသွား ရ လေ အောင် ၊ သောက စိတ် လေး တွေ နဲ့ လုပ် မိ လုပ် ရာ လုပ် ကြ ရ တာ ပါ။
ဒေါ်လာရောင်း သူ တွေ ၊ ရွှေ ဆိုင် တွေ က မျက် နှာ ထား တွေ၊ မာ ကြ လို့ ပေါ့ ဗျာ။
ဖုန်း ဆက် ပြီး ဈေး မေး လို့ က တော့ ၊ ဘရာသာ ၊ ဆိုင် ကို သာ အခု လာ ခဲ့ ပါ။
ဈေး က ပြော လို့ မရ လို့ ပါ ဆို ပါ တယ် ၊ ဆိုင် ရောက် တာတောင် ပိုက် ဆံ အရင် ပေး
ထား ဈေး က ပြီး မှ ဖြတ်ပေး မယ် ဆို ပြီး ၊ ဟန်းဖုန်း လေး နဲ့ ဟို မေး ၊ ဒီ မေး
မေး လိုက် ရ တဲ့ ဈေး တော်တော် နဲ့ မ ပြီး ပါ ဗျာ။
ဆိုင် ရှင် တွေ ဖုန်း ပြော နေတာ ကို ဘေး က ထိုင် နားထောင် နေ ရ တဲ့ ငွေမာ ဝယ်ချင်သူ
ရွှေဝယ် ချင် သူ တွေ က အင် မတန် သနား စရာ ကောင်း ပါ တယ် ၊ သူ ကြား နေ ရ တာက
မိနစ် ပိုင်း အတွင်း ဈေး က ဂဏန်း တွေ က တဖြေးဖြး ကြီး လာ တာ ကြား ကြား နေ ရ တော့
ဟံမယ်မင်း ငါ က ကံ အင်တန်ကြီး လွန်း လို့ ဒီ ဈေး နဲ့ အရွက်စိမ်း လေး ၊ ရွှေ တုံး လေး
လက် ဝယ် ရ လိုက် တာ ထင် သွား ကြ ပ ဗျာ။
ဆိုင်တွေ က တော့ ရောင်း လိုက် ကြ ရ တာပါ ဗျာ ၊ ရွှေ အထည် အတုံး ကြီး အတုံး သေး
အထည် ၊ လက် ကောက် ၊ လက် စွပ် ၊ ဒီဇိုင်း ကောင်း ကောင်း ၊ မကောင်း ကောင်း
ကိုယ် နဲ့ လက် မှာ တော် တော် ၊ မ တော် တော် ၊ ပါတ်ကား ရွှေ ဘောက် ချာ လေး ရ
ရင် ကျေကျေနပ် နပ် ဝယ် သွား ကြ ပေါ့ ဗျာ ၊ ဒေါ်လာ ရောင်း သူ တွေ က လဲ အကိုက် ပါ
ဘဲ ၊ ခေါင်း ကြီး ခေါင်းသေး ၊ အရွက် ဝါ အမဲ ၊ အရွက် စုတ် ၊ ခေါက် ရိုး ကျိုး မကျိုး
မကြည့် အား တော့ ပါ ဗျာ ၊ ယူနိုက်တစ် စတိတ် ၊ ဝမ်း ဒေါ်လာ စာတန်း ဖတ် လို့ ရရင် ဘဲ
ဝယ်လိုက် ကြ ပေါ့ ဗျာ ၊ တော် တော် ၊ ဘရုတ် ဘရက် ပါ ခင် ဗျာ။
ဒီ ရက်ပိုင်း တိုင်းပြည် စီးပွား ရေး ဗြုန်း ဆို တက် သွား လို့ ၊ လူ တွေ ဝယ် နိုင် ကြတာ
ဒိုင်း က နဲ့ စီးပွား ရေး ကျ သွား လို့ ၊ ဗမာ ငွေဈေး ထိုးကျ သွားတာ မဟုတ် ရ ပါ ဗျာ
လက်ကြီး ကုန် သည်တွေ ပြော ကြ တာ က ၊ ဂျာနယ် တွေ တော် တော် များ များ မှာ
သမတ လစာ အသစ် က သိန်း ၅ဝ ၊ ဘယ်သူ က လစာ သိန်း ၄ဝ ၊ ဝန်ကြီး လစာ က
သိန်း ၃ဝ ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် တွေ က လစာ ၃ သိန်း ၊ ဒေသလွှတ်တော် အမတ်တွေ
က လစာ ၂ သိန်း ဆိုပြီး ခေါင်းစီး အမဲ တွေ နဲ့ သတင်းထူးတွေ အဖြစ် ဖော် ပြ လာ တာ ရှိ
ပါ တယ် တဲ့ ဗျ။
ဒီ သတင်း တွေ နဲ့ ဆက် စပ်ပြီး ဝန်ထမ်း တွေ ကို လည်း လစာ တိုး ပေး မယ် ၊ ၃ ဆ ၄ ဆ
ရောက်အောင် တိုး ပေး မယ် ၊ အာဆီယံ ထက် လစာ မနိမ့် အောင် တိုး ပေး မယ် ဆို တဲ့
သတင်း တွေ ထွက် လာ ပါ တယ် ၊ အနိမ့်ဆုံး အောက်ခြေ ဝန်ထမ်း အဆင့် ဒါလဝမ် တို့၊
ရိုးရိုးစစ်သား အဆင့် တောင် တလ ၁ သိန်း ကျော် ပေးတော့ မယ် ၊ ညွှန်ချုပ် ညွှန်မှူး ဆို ရင်
လစာ ၁၅ သိန်း ၊ သိန်း ၂ဝ လောက် ရ မယ် ဆို ပြီး ပါးစပ် သတင်းတွေ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။
စဉ်းစားကြည့်ကြ ပါ ခင် ဗျာ ၊ ဟိုအရင် ၅၆ ကျပ်စား စာရေး လစာ တုံး က လဲ သူ စားနိုင်တာ
ငပိရေ တခွက်ပါဘဲ ၊ နောက် ၁၂၆ ကျပ် စာရေး လစာ တုံး က လဲ သူ စားနိုင်တာ
ငပိရေ တခွက်ပါဘဲ ၊ နောက် တဆင့် တိုးလို့ ၄၅ဝ စာရေး လစာ တိုးခဲ့ လဲ သူ စားနိုင်တာ
ငပိရေ တခွက်ပါဘဲ ၊ ဆယ် ဆ တိုးလိုက် လို့ ၄၅ဝဝ စာရေး လစာ ဖြစ်တော့ လဲ သူ
စားနိုင်တာ ငပိရေ တခွက်ပါဘဲ ၊ ၂ဝဝ၆ က ၂ သောင်း ခွဲ ဖြစ် အောင် စာရေး လစာ
ဖြစ်လာတော့ လဲ သူ စားနိုင်တာ ငပိရေ တခွက်ပါဘဲ ၊
ပြီးခဲ့ တဲ့ နှစ် က လူ တိုင်း ကို နောက်ထပ် ၂ သောင်း စီ လစာ ထပ်တိုးလို့
၄ သောင်း ရောက် တော့ ၊ စား နေ ရ တဲ့ လဲ ငပိရေ တောင် ၊ နဲနဲ ထပ် ပြီး ရေ ကြဲ သွားလို့၊
ငရုတ်သီး မှုန့် တောင် သိပ် မထည့် နိုင် တော့ ပါဘူး ၊
အခု လို အနည်း ဆုံး ၁ သိန်း ကျော် လစာ တွေ အာဆီယံ လစာ ပေး မယ့်
ခေတ်ဆိုရင် လဲ ၊ ထုံးစံ အတိုင်း ငပိရည်ကြဲ ဆိုတာ သေချာ နေ တော့ ၊ သူ သူ ငါ ငါ
ငါ့ ငွေ လေး ၊ ပါးသွား ရ ချီ ရဲ့ ဆိုပီး ၊သော က ပွားကြ မှာ ၊ အသေ အချာ ပေါ့ ဗျာ။
ဟုတ် မဟုတ် တော့ သေချာ မပြောနိုင်ဘူး ပေါ့ ဗျာ ၊ စောင့် တော့ ကြည့် ရ ဦး မှာ ပါ
အခု ဂျာနယ်တွေ ထဲ ပြထားတဲ့ လစာ စာ ရင်း အတိုင်း ဆို ရင် တော့ ၊ အခု ပြော နေ သလို
တိုး ဘို့ က သိပ် မလွယ် ဘူး ခင် ဗျာ ၊ အခု ညွှန်ချုပ် လစာ က ၂ သိန်း ဝန်းကျင် ပါ။
ဂျာနယ် တွေ ထဲ ပြထား တာ က ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် တွေ က လစာ ၃ သိန်း ၊
ဒေသလွှတ်တော် အမတ်တွေ က လစာ ၂ သိန်း ဆိုပြီး ပြောထား ပါ တယ် ၊ ဆို တော့ ကာ
ညွှန်ချုပ် လစာ က သုံးသိန်း ကျော် ဘို့ ဖြစ်နိုင် ချေ သိပ် မရှိ ပါဘူး ၊ တိုး ရင် တဦး ကို
၃ သောင်း လောက် ဘဲ တိုး နိုင် ခြေ ရှိ ပါ တယ်။ လူ တွေ ထင် ကြေး နဲ့ ဈေး တွေ မငြိမ် ရင်
အခု စား နေ ရ တဲ့ ငါးပိရည် တောင် ၊ ညစာ မနက်စာ တခါ ထပ် ခွဲ နေ ရ ပါ ဦမယ် ခင်ဗျာ
အခု လက် ရှိ တရား ဝင် လစာ တွေ က ၊ ဦးသန်းရွှေ က အများဆုံးပါ ၊ တလ ကို ၁၂ သိန်း ပါ
ဒုတိယလူ က ၇ သိန်း ရ ပါတယ် ၊ ဝန်ကြီး လစာ က ငါးသိန်း ၊ ဒု ဝန်ကြီး လစာ က ၃ သိန်း
ညွှန်ချုပ် လစာ က ၂ သိန်း ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ခံစားခွင့် ရ နေတာ တွေ က အခု လူတွေ
သွေးပျက် နေ ကြ တဲ့ တလ သိန်း ၅ဝ ကို ဘယ် မှု ကြ မလဲ ဗျာ ၊ တလ တလ ရ တဲ့
ဓါတ်ဆီဂါလံ တွေ ၊ ပါမစ်ရထား တဲ့ အိမ်ရှိလူ ကုန် ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ၊ ရထား တဲ့ မြေကွက်
တွေ ၊ ဆောက်ထားတဲ့ အမြို့ မြှို့အရွာ ရွာ က တိုက်ကြီးတွေ ၊ သား သမီး တွေ နံမည် နဲ့
ထောင် ထား တဲ့ ကုန်မဏီ တွေ ၊ နှစ်တိုင်း အစိုးရ ဈေး နဲ့ ဝယ် ယူခွင့် ရထား တဲ့
ကိုယ်ပိုင် ကားတွေ အစီးပေါင်း မနည်းပါ ဗျာ ၊ ပါဂျရို လို ကားမျိုးတောင် အစိုးရ ဈေး
၁ဝ သိန်း ဘဲ ပေး ရ တာပါ ။ အရင် ဝန်ကြီး တွေ က ၅ သိန်း ဘဲ လစာ ရ ရှာ တော့
တိုက် တလုံး သိန်း အစိတ် နဲ့ ကား တစီး ၁ဝ သိန်း တန် လောက် ဘဲ ၇ စီး လောက်
ဘဲ ဝယ်စီး နိုင် ရှာ တာ ပါ။ အဲ ဒါ က စစ် အစ်ုးရ ခေတ် ကိုးဗျ။
အခု က အရွေးချယ် ခံ အစိုးရ ဆိုတော့ အဲ လို မျိုး တွေ ရ ချင် မှ ရ ပါ တော့ မလား
မသိ သေး ပါ ခင် ဗျာ ၊ တခြား နိုင်ငံ တွေ က အစိုးရ တွေ လို ၊ လစာ မှ တပါး
အခြား ဝင်ငွေ မရှိစေ ရ ၊ ရ တဲ့ လစာ အတိုင်း ၊ အများ ပြည်သူ တွေ ဝယ်စား နေ ရ တဲ့
အတိုင်း သုံးစေ ဆိုရင် ၊ ဒီ သိန်း ၅ဝ အတိုင်း သုံး ဆို လို့ က တော့၊ အခု ဝန် ကြီး သစ် တွေ
အကုန်လုံး ခြုံး မဲ ချ ပြီး ၊ ထိုင် ငို ကြ မယ် ထင် ပါ တယ် ၊ အရင် က ရ တဲ့ လစာ ၅ သိန်း
နဲ့ ၊အကန့် အသတ် မရှိ တဲ့ လုပ် ပိုင် ခွင့် က ၊ အခု ရ မဲ့ သိန်း ၅ဝ ထက်
ပို ပြီး ၊ အများ ကြီး ၊ တွက် ချေ ကိုက် နေ တာ ကိုး ခင် ဗျ။
ဘယ်လို ဖြစ် လာ မယ် ဆို တာ မသိနိုင် သေး ပါဘူး ၊ ပြော ထား တဲ့ ဥပဒေ အတိုင်း ဆို ရင်
သိန်း ၅ဝ စား သမတ မင်း က ၊ ပြည်သူ့ အခွန်နှုန်း ၃ဝ % ( ၁၅ သိန်း ) လစာ အဖြတ် ခံ
ရရင် ၃၅ သိန်း ဘဲ ၊ တရားဝင် ရ ဘို့ ရှိ ပါ တယ် ခင် ဗျာ ၊ ဥပဒေ အထက် မှာ
တကယ့် ကို ၊ ဘယ်သူ မှ မရှိဘူး ဆို ရင် ပေါ့ လေ ၊
တကယ်တော့ သမတ လစာ သိန်း ၅ဝ ပေး မယ် ဆို လိုက် ယုံ နဲ့ ၊ ငွေဈေး တွေ ပွ ပြီး
ဈေး ပြောင်း ရ တာ ဆို ရင် ၊ က မောက် က မ ပါ ၊ အရင် ကတဲ က ၊ တလ ကို သိန်း ၅ဝ
ဝင်ငွေ ရှိ တဲ့ လူ တွေ အများကြီး ပါ။ ဆည်မြောင်း က အေအီး မင်း တို့ ၊ ကပ် စတန် ညွှန်မှူး
ဂျီအီးတပ် က လမ်းဗိုလ် တို့ ၊ နယ်စပ်ဂိတ်နား က ဗျူဟာမှူးတို့ ၊ အရင် ထောက်လှမ်းရေး
အဖွဲ့က တပ်ကြပ်ကြီး တို့ ၊ ဟို အသည်း တို့ နှလုံး တို့ အထူးကု တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး တို့
နေပြည်တော် မှာ မီးလိုင်းဆွဲ တဲ့ ကန်ထရိုက် တို့ ၊ စာပေးစာယူ အနီးကပ် ဝိုင်း ကျူရှင်ပြ
တဲ့ ကထိက တို့ ၊ မနှစ် က ဆယ်တန်းမေးခွန်း ထုတ်ရ ပြီး ၊ ဒီ နှစ် ကို ဆယ်တန်း အထူး
ရှယ် ဝိုင်း ကျူရှင်ပြတဲ့ ပါမောက်ခတို့ ၊ ပါရဂူ ကျမ်း ကြီးကြပ် ရေး ဆရာ တို့ ၊ မဟာတန်း
တွေ ကို ကျမ်းလဲ ကြီးကြပ် ပေး ပြီး ၊ သီးစစ် ပါ ရှဲဒိုး ထိုင်ရေး ပေးတဲ့ ဌာနမှူး တို့ ၊
အိမ်ခြံမြေ ရာဖြတ်ပေးရတဲ့ အခွန် ဝန်ထောက်မင်းတို့ ၊ တရားမမှု ကိုင် ရ တဲ့
တရားသူကြီးမင်းတို့ ၊ အိမ်ခြံ မြေရာဇဝင် ၊ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက် လုပ်ပေရ တဲ့ မြေစာရင်းဦးစီး
တို့ အများကြီးပါဗျာ ၊ ဆက်ပြော ရင် ကုန် မယ် မထင်တော့ ပါ ခင် ဗျာ၊
ဒီ လို လူစား မျိုး တွေ အပြင် ၊ တရား ဝင် သမာ အာဇီ ဝ နဲ့ ဒီ လို ဝင်ငွေ ရ နေ နိုင် တဲ့
လူတွေ လဲ အများကြီး ပါ ၊ သမတ လစာ သိန်း ငါး ဆယ် ဆို တာ တနေ့ ဝင် ငွေ ၂ သိန်း
မပြည့် ပါဘူး ၊ ၄၈ ဘတ်ကား လိုင်း ထောင် တဲ့လူ တွေ တနေ့ ကို ၂ သိန်း ဝင်ငွေရှိ ပါတယ်။
ရန်ကုန် မန်း တလေး အဝေးပြေးကား တွေ က တနေ့ ကို ၆ သိန်း မရရင် မကိုက် ပါဘူး။
ကန်တော်ကြီး နား က ပါဝါလိုက် လို စားသောက် ဆိုင် မျိုး ဆို ရင် ရောင်းကောင်း ရင်
တနေ့ သိန်း ၁ဝဝ ကျော် ပါတယ် ၊ အောင်သုခ ထမင်းဆိုင် မျိုး က တနေ့ သိန်း၃ဝ ဘိုး
ရောင်းရပါတယ် ၊ ကားပွဲစားတန်း နား က လဘက်ရေဆိုင် တွေ တနေ့ ၄ သိန်း အထက် မှာ
ရှိ ပါ တယ် ။ တလ လစာ ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ ကျော် ရ တဲ့ အဝေး က ကျူးပစ်တွေ ၊ အခု
ကျွန်တော် ပြော နေ တာ ကို ပြုံး ပြီး ဖတ် နေ ကြ မှာ ပါ။
ဒါ ပေ မဲ့ အစိုးရ က လစာ တွေ တအားတိုး ပေး တော့ မယ် ဖြစ် လာ တဲ့ ကော လ ဟ လ
က သာမန် ပြည်သူတွေ ကို အတော် သောက ပွားစေ ပါ တယ် ၊ ငွေ ကြေး ဖောင်းပွ မှု
ဖြစ် ပြီး ၊ ရှိ မဲ့ စု မဲ့ ဖွတ် ကလိ ဒင်္ဂါး က လုံး ပါး ၊ ပါး တော့ မဲ့ အရေး တွေး ကြောက်
ကြ ရင်း အခု လို ဖြစ် ကုန် တာပါ ၊
ပုံမှန် ဒေါ်လာ ထိုင်ရောင်း နေ တဲ့ လူ တို့ ၊ ရွှေဆိုင် တွေ က တော့ ၊ ဈေး တက် တက်
ကျ ကျ ၊ အရေး မကြီး ပါ ၊ သူ တို့ က ပုံ မှန် ၊ ဒါ ကို ဘဲ နေ့ စဉ် ရောင်း ဝယ် နေ ကြ
တာပါ ၊ ဈေး တက် သည် ဖြစ် စေ ၊ ကျ သည် ဖြစ် စေ ၊ အခု ရောင်း လို့ ရ သမျှ
ဒါ တွေ ကို ဘဲ အကုန် ပြန် ဝယ် ပြီး ၊ ဝယ် လို့ ရ သမျှ အကုန် ပြန် ရောင်း ပြီး
ရောင်း ဈေး ဝယ် ဈေး ၊ အကွာ အဟ နဲ့ ဘဲ စီးပွား ပုံ မှန် ဖြစ် နေ ပါ တယ်။
အခု ယောက် ယက် ခတ် နေ ကြ တာ က ၊ မရှိ မဲ့ စု မဲ့  ၊ လူ လတ် တန်းစား တွေ ပါ
ပိုက် ဆံ လေး သိန်း ၃ဝ လောက် ကို အစိမ်း ဘဲ ကိုင် ရ မလား ၊ ရွှေ လေး ဘဲ
ဝယ်ထား ရ မလား ဗျာ များ နေ ကြ ရ တာ ပါ။ ဒါတွေ က အမှန်မှာ တိုင်း ပြည် အတွက်
အတော် နစ် နာ ပါ တယ် ၊ လူ တွေ ရဲ့ အရင်းအနှီး တွေ က ၊ လောလော ဆယ် ငွေ သေ
ဖြစ် သွားပြီး အရွက် စိမ်း တို့ ရွှေ တုံး တို့ ဘဝ မှာ၊ ငွေ သေ ဖြစ် ကုန် ပါတယ်။
နောက်တခု က တိုင်းပြည်တွင်း က ရှိတဲ့ သူ တွေ အကုန် အတူတူ ပါ ဘဲ
လူ ဆို တာ က လောဘ နဲ့ အတ်တ သမားတွေ ကိုး ဗျ ၊ ရောင်းဈေး တခု ရ ပြီးရင်
ပြန်လျော့ မပေးချင်ကြဘူး ၊ သူ သူ ကိုယ် ကိုယ် ရ သမျှ တိုး ပြီး လို ချင် သူ တွေ ပါ။
တဒေါ်လာ ၁၂ဝဝ လောက် က နေ ၈ဝဝ ကျော် အထိ ဈေးဆင်း လာ ပေ မဲ့ ၊ ပဲ ပြုတ်သည်
မုန့်ဟင်းခါးသည် တို့ ကစ လဘက်ရေ ဆိုင် တွေ ထမင်း ဆိုင် တွေ ဘယ်သူ မှဈေးလျော့
မရောင်းကြဘူး ဗျ။ တက်ပြီးဈေး က တော့ ပြန် မဆင်းပါ ။ ခု လို ရှစ်ရာ ကျော် က နေ
ကိုးရာကျော် အထိ ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက်ရော အကုန်လုံး က ဒေါ်လာဈေး တွေ တက်ကုန်
တယ် ဆိုပြီး ရောင်းဈေးတွေ တင် ကြ ပြန်ရော ဗျ။
အခု လို ဟို အကြောင်း ဒီ အကြောင်း နဲ့ ငွေဈေး တွေ ကမောက် က မ ၊ ဖြစ် လာ ရင်
တနွယ် ငင် ၊ တစင် ပါ ဆို သလို ၊ ပြသနာ က အကုန်လုံး ကို လှည့်ပါတ်
တက်စေပြီး ကျန်တဲ့ လူ နေမှု စနစ်တွေ ကို သံသရာ မဆုံး ၊ ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေပါတယ်။
ဒါတွေ က အခု လုပ် နေ တဲ့ ၊ လွှတ်တော် မှာ အများကြီး တာဝန် ရှိ ပါ တယ် ၊
အစိုးရ က ဘာ ဘဲ လုပ်လုပ် ၊ ထင်သာ မြင်သာ ရှိ ဘို့ လို ပါတယ်။
ကျိုးကြောင်း ဆီလျော် ဘို့ ၊ လူတွေ ကို လေးစား ဘို့ လို ပါတယ်။
လစာ တိုးပေး မယ် ဆို လဲ ၊ ရ ငွေ သုံးငွေ ဘတ် ဂျက် ဇယား နဲ့ ၊ အစိုး ရ မှာ
ဘာ ဝင် ငွေ တွေ ရှိ မယ် ၊ ဘာ အတွက် ဘယ် လောက် သုံး မယ် ၊ ဒါကြောင့်
ဝန်ထမ်း တွေ ကို ဒီ လို လစာ ပေး နိုင် မယ် ဆို တာ ၊ အကျိုး အကြောင်း ခိုင် ခိုင် လုံလုံ
ဥပဒေ နည်းလမ်း တကျ လုပ်ဆောင် မယ် ဆိုရင် ၊ ဒီ လို ကမောက် က မ ပြသနာ
ဖြစ် စရာ အကြောင်း မရှိ ပါ ခင် ဗျာ ၊ အရင် လို ဘဲ ၊ ဘဏ္ဍာတော် တိုက် က လို သလောက်
ထုတ် ယူ စေဗျား ၊ ပ လို့ ဂျိ ၊ ဆို ပြီး ၊ ထင် ရာ ဆက် လုပ် ဦး မယ် ဆို ရင် တော့
တိုင်းပြည် ရဲ့ နောင် ရေး က ၊ ရင် လေး စရာ ပါ ခင် ဗျာ ။
အဲ အဲ ၊ နောက် တကြောင်း က နန်းတော် ကြီး ထဲ က ဖိုက် တင် ခန်း တွေ က လဲ တကြောင်း
အပါ အဝင်ပေါ့ ဗျာ ၊ ဟို ဗိုလ်ချုပ် က ခံ ပြော လို့ ၊ ဖြုတ် ပစ် လိုက် ပြီး ၊ ဒီ ဗိုလ် ချုပ် က
လွှတ်တော်အမတ် ကရော ၊ နိုင်ငံ ရေး ပါ တီ က ပါ ၊ ရှိ သမျှ အကုန် လုံး ထွက်စာ တင် သွား
ပြီ ၊ အချင်းချင်း မကြေ မနပ် ဖြစ် ကုန် ကြ ပြီ ၊ နောက် ထပ် များ ပြသနာ ထပ် ပေါ် ရင်
ခက် ရ ချီ ရဲ့ ဆိုပြီး ၊ ဈေး တွေ တက် ကုန် တာ လဲ ပါ တာ ပေါ့ ဗျာ။ ဒီ နေ့ ဘဲ ကြည့် လေ
ဟို မကြေနပ်လို့ အကုန် လုံး ကို ချဲ လင်း လုပ် ပြီး ၊ ရှိ သမျှ ရာထူး က နေ ထွက် စာ တင်
သွား တဲ့ ဒီ ဗိုလ်ချုပ် က ရာထူးကြီးကြီး နေရာ မှာ ပုံ စံ တမျိုး နဲ့ ပြန် ရောက် လာ တော့
မနေ့ က နေ့ လည် ၁ နာရီ အတွင်း ရွှေဈေး က တထိုင်ထဲ တသောင်း ကျော် ပြန် ကျ သွား
ပြန် ရော ။ လော က ကြီး အေး ချမ်း အောင် ၊ သူ တို့ လဲ ပျော် နေဘို့ လို ပါ သေး သဗျာ။
တကယ် တော့ အများ မှန်းထား ကြ တာ ၊ ငွေမာဈေး နဲ့ ရွှေဈေး က တက် စရာ မရှိ ရ မဲ့
အချိန် ပါ။ သိ တဲ့ အတိုင်း ပါ ဘဲ ၊ ရန် ကုန် ထဲ တင် မြေ ကွက် ၊ တိုက် ခန်း နဲ့ နိုင်ငံ ပိုင်
အဆောက်အဦ တွေ ၂ဝဝ ကျော် လောက်လေလံ ပြစ်ဘို့ ရှိ ပါ တယ်။
ဒါ မျိုး က စစ်အစိုးရ အနေ နဲ့ ဘဲ ထင် ရာ လုပ် လို့ ရ တာပါ ၊ လွှတ်တော် အစိုးရ ဆိုရင်
ဥပဒေတွေ လို လာမှာ ဆို တော့ ၊ စစ် အစိုးရ ရဲ့ နောက်ဆုံး လေလံ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။
ပစ် မဲ့ နေရာ တွေ က လဲ ၊ ရွှေတောင်ကြား ၊ ဝင်ဒါမီယာ ၊ အင်းယားကန် တဝိုက် ၊
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ထိပ်တန်း ရွှေနေရာ တွေ ဆို တော့ ၊ ရ ချင် လို့ အကြံ ကြီး ကြံ နေ သူ တွေ
အများကြီး ပါ ၊ ဒါ မျိုး ၊ ဒီ နေ ရာ မျိုး ဒီ ဈေး မျိုး ဆို တာ က လဲ ၊ ဒီ တခါ နောက် ဆုံး
ဆို တော့ လက်ကြီး သမား ၊ လူ လည် တွေ ၊ စိတ် ထဲ မှာ ၊ သည်း သည်း လှုပ် ပါ။
ဒါ ပေ မဲ့ သူ တို့ လဲ ၊ ငွေ ထပ် လိုက် ဘို့ ရာ ခြေ ကုန် လက် ပန်း ကျ နေ ပါ ဘီ။
ဒါ တွေ ကို ဆက် လိုက် ဘို့ ဆို ရင် ၊ အပြင် က ငွေမာ အကူ လို လာ ပါတယ်။
အပြင် က အကူ ငွေ မာ ၊ လက် ထဲ ရှိ တဲ့ ၊ မိန်းမ ဆီ က ရှိ သမျှ ရွှေ တွေ နဲ့ လိုက်ကြ ရ
မှာပါ။ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် တွေ က ၊ ရွှေဈေး ငွေ မာဈေး က စိတ် ကြိုက် မရ သေး တော့
အား ငယ် နေ ကြ တာပေါ့ ဗျာ။ သူ တို့ အဖွဲ တွေ ငွေဖော် ချိန် ဖြစ် လာရင် ၊ ငွေမာဈေး နဲ့
ရွှေဈေး က ထပ် ဆင်း ရ မဲ့ အခြေအနေ ပါ။ ကားဈေး က လဲ အား မရှိ ချိန် ဆိုတော့ အကြံ
ကုန် နေ ကြ ပေါ့ ဗျာ ၊ ဘယ်လို ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖေဖဝါရီလ ကုန် ဆိုရင် လက် ထဲ မြန်မာငွေ
များများ ကိုင် ထား နိုင် မှ ၊ ဒီ မြေကွက် လေလံ တွေ ကို ဝင် ပြီး လှုပ် ရှား လို့ ရ နိုင် မှာ ပါ။
ခု များ တော့ ဒီ လူ တွေ ကို ဘိုးဘိုးအောင် များ ဝင် မ လိုက် သလား
ကိုကြီးကျော် ဘဲ စောင့် ရှောက် လိုက် သလား ၊ မသိပါ ဗျာ ၊ ငွေမာဈေး နဲ့ ရွှေ ဈေး က
၄ ရက်လောက် အတွင်း ၊ သူ တို့ စိတ်ကြိုက် ချက်ချင်း လက် ငင်း ၊ဝုန်းက နဲ ထ ၊ ခုံ တက်
သွား တော့ ၊ ငွေ ဖော် ချင် နေ တဲ့  ၊ လက်ကြီး သမား သူ တို့ တွေ က တပြုံး ပြုံး ပေါ့ ဗျာ
စီးပွားရေး ပုံစံ အမှန် က တော့ သင်္ကြန် အပြီး မှ ရေးတေးတေး တွေ့ မှာပါ။
အသက် ညဏ်စောင့် ၊ ဥစာ ကို ကံ က စောင့် ရှောက် ပါ သတဲ့ ဗျာ ၊
ဘာ သတင်း ကြား ကြား ၊ ဗြုန်း က နဲ ၊ နား ထင် သွေး တက် ပြီး
သော က မ ပွားကြ ပါ နဲ့ ခင် ဗျာ ၊ ဖြစ် သမျှ က တော့ သူ့ အကြောင်း နဲ့ သူ ပါ။
အကြောင်း မရှိ ဘဲ နဲ့ အကျိုး ဖြစ် မလာ ပါ ခင် ဗျာ။
အေး ဗျာ ၊ အား နာ ပါ တယ် ၊ စာ ဖတ် သူ ကျူးပစ်ကြီး များ ၊ ခင် ဗျာ ။
ရေး ရ တဲ့ သတင်း တွေ က ၊ အခု လို ဖတ် ရ တာ ၊ တောင် ရောက် ၊ မြောက် ရောက် ၊
က မောက် က မ ၊ တွေ ဖြစ် နေ မှာ ပါ။
အခု လို ဖြစ် နေ တဲ့ အကြောင်း ရင်း တွေ ကို က ၊ က မောက် က မ ဆို တော့
အား နာ လိုက် တာ ဗျာ လို့  ဘဲ ၊ ဆို ပါ ရ စေ တော့ ဗျား ။
BY YeYint Nge ... 2/17/2011 1 comment
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2485K View Download
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2525K View Download
17 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 2/17/20110comment
နယူးယောက်မြို့ ၀ုဒ်ဆိုက်ကျောင်းဝင်းမှာ ကျင်းပမယ့် ဂီရိလေဘေးရန်ပုံငွေ ဈေးပွဲတော်
လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာရခိုင်အမျိူးသားအသင်း (WAO) ကတဆင့် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူမှုရေးလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များကို ပေးလှူပြီးတော့ ဂီရိမုန်တိုင်းသင့် ရခုိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကူညီရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေး သုံးစွဲမျာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
I’d like to invite you, your friends and family members to this
extraordinary fundraising event for Cyclone Giri victims on Sunday.
There will be plenty of Burmese and ethnic food for everyone to enjoy
along with various fun-filled entertainment (traditional Arakanese and
ethnic dances, DJ and NYC Burmese youth musicians) programs. Since all
the food are already donated by generous NYC Burmese community members
that we’re only charging $2.00, $3.00, and $5.00 per plate/cup, and
there will be over 25 food stalls selling all kinda authentic Burmese
food at the event. So, this will be your best chance to come out and
enjoy Burmese food and entertainment, and contribute towardaworthy
Time: 10am – 5:00pm (10am-1:30pm food bazaar, 1:30pm-5:00pm entertainment)
Location: P.S. 12 – James B. Colgate School (42-00 72nd Street,
Woodside, NY 11377 – nearest trains [7,E,F,M,R])
Cyclone Giri struck Burma’s western coastline in Arakan State on
October 22, 2011 with winds in excess of 160 mph, waves up to 26 ft,
and broughtastorm surge up to 12 ft. This category4cyclone killed
at least 157 people and leaving more than 300,000 homeless. The
cyclone also destroyed over 100,000 homes and structures along with
75-90% of agriculture land and fishery in the region.
Of course, Burma’s military regime was once again (after 2008 Cyclone
Nargis) criticized by both local and foreign media along with the
international community for not giving residents sufficient warning of
the storm and withholding information on the loss of life and
devastation afterward. Very little and limited assistance had reached
thousands of survivors days and months after the storm's passage.
Thousands of survivors continue to suffer due to the insufficient
relief making it into the region both by the regime and the
international community. The United Nations, international
organizations and governments pledged to provideatotal of US$54
million in aid, but only 20 million received!
Harn Lay Interview
take care of hiring taxi in Yangon.JPG
German TV STATION ARD Interview with Daw Aung San Su Kyi (part_ 2)
German TV STATION ARD Interview with Daw Aung San Su Kyi (part_ 1)
စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှာစကား
ဒေါ်စု - အဓိက အရေးကြီးတာ ပြည်ပကဆိုရင် ညီညွတ်မှု ရှိဖို့ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းကြတယ်ဆိုတာမျိုးကို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် စင်္ကာပူမှာ လာပြီး အလုပ်လုပ် တဲ့သူတွေမှာ ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင် အချင်းချင်းဝိုင်းပြီး အကူအညီပေးတာ၊ Social Group လူမှုရေးအထောက်အပံ့ပြု၊ လူမှုရေးအကူအညီအဖွဲ့လိုမျိုး စင်္ကာပူမှာ စပြီးလုပ်စေချင်တယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဆက်စပ်ပြီးတော့ Network လို သဘောမျိုးပေါ့။ အဲလို အဖွဲ့လေးတွေကို လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ ထိုင်းတို့၊ မလေးရှားတို့မှာဆို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်၊ ကျွန်မတို့က ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကို ကူညီစေချင်တယ်။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုရင်တောင်မှ တရားဥပဒေအရ လိုက်ပေးမယ့် ရှေ့နေငှားပေးတာတို့၊ ထောင်ကျသွားပြီး အကျဉ်းကျသွားပြီ ဆိုရင်တောင် ထောင်ဝင်စာ သွားမယ့်လူတွေရှိတာတို့၊ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးတာတို့ ၊ အဲလိုဟာလေးတွေနဲ့ စပြီးပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ညီညွတ်မှုကို ထူထောင်စေချင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူ - တတိယအချက်ကတော့ ခုနက ဒေါ်စု ကျွန်တော်တို့ကို အကြံပေးသလိုပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ဦးစီကို NLD ကနေ မဲဖောက်စနစ်နဲ့ ကူညီပံ့ပိုးနေတာကို ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်ကို ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကူညီဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ရေရှည်စီမံကိန်းအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ မိသားစုထဲက သားသမီးများရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိစ္စကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်စုထံမှ အကြံပေးချက်တွေကို လိုအပ်ပါတယ်။
ဒေါ်စု - အခုလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကို မဲနှိုက်ပြီးတော့ တာဝန်ယူမယ်ဆိုတာသိရလို့ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီကိစ္စကို စနစ်တကျလေး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် တွေရော ၊ အဲဒီကမှ တဆင့် ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရော တာဝန်ရှိစေချင်တယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလကား ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သာ ပေးရတာ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်အားနဲ့ ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟာ တကယ့်ကိုပဲ အကူအညီလိုနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကို ကူညီတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ ရှိရင် ရေတိုအနေနဲ့ မဟုတ်ပဲနဲ့ ရေရှည်အစီအစဉ်တွေနဲ့ လည်းကူညီ စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းက လူမှုအထောက်အကူကတော့ အကျဉ်းသားမိသားစုတွေရဲ့ သားသမီးများ ပညာရေးကို ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရေရှည်ပေါ့နော်။ သူတို့ ပညာမတတ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ပညာတတ်လာတဲ့အခါ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်မယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ လူငယ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ အဲလိုကိစ္စမျိုးကို ဦးတည်ပြီးတော့ လုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကျန်းမာရေးပေါ့။ အဲဒီကျန်းမာရေးကို အဓိကထားပြီး ကူညီစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပကနေ ကူညီနိုင်မယ့်လူတွေကတော့ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ သားသမီးများ ပညာရေးပေါ့၊ အဲဒါကို အဓိကထားပြီး ကူညီစေချင်ပါတယ်။
ဒေါ်စု - နောက်တစ်ခုအရေးအကြီးဆုံးက ပြည်ပနိုင်ငံများကနေပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို သိရှိနားလည် ဖို့အတွက်ကို အမြဲပဲ မျက်လုံးဖွင့် နားစွင့်လို့ နေရအောင်လို့ တတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ အခြေအနေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ကမ္ဘာက သိလာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကမ္ဘာက ပိုပြီး သိလာနိုင်မှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အရေးကလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ မြန်မာတွေလည်း ပါပါတယ်။ မြန်မာတွေကတော့ လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းရင်းသားပေါ့။ အဲဒီတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွှတ်ကြဖို့ ကျွန်မတို့ အများကြီး ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒါဟာ အလိုလိုဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးပေါ်ကနေ ကျလာမယ့် အရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ လုပ်ယူမှ ဖြစ်မှာပါ။
ဒေါ်စု - ကျွန်မတို့ အဲလို အသေးစိတ်လုပ်ဖို့လည်း စီစဉ်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုစင်္ကာပူမှာ ရောက်နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကလည်း ပြန်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ စင်္ကာပူကို ထွက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်မတို့ကို အသိပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ကလည်း ဒီထက်ပိုပြီးတော့ တိတိကျကျ ပြုစုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကြေငြာစာတမ်းမှာလည်း ပါပါတယ်။ ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသာ လာပြီးတော့ ကူညီပေးနိုင်ရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရေးထားပါတယ်။ အားလုံးကနေပြီးတော့ လူရိုသေရှင်ရိုသေရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်အဖွဲ့ကနေ လာပြီးတော့ လေ့လာမယ် ဆိုလို့ရှိရင် စီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို လိုလားတဲ့သူနဲ့ ဖယ်ရှားစေချင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာ သူတို့က ပိုပြီးတော့ သမာသမက် ကျကျနဲ့ တချို့ကိစ္စတွေကို အများသဘောတူ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့တခါးဝမှာ ရောက်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးလှိုင်းများ(အောင်မိုးဝင်း)
“မူဘာရက်” ပြုတ်ကျအပြီး၊ နောက်တနေ့မှာ တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင်ညီအကိုတော်များအဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ရုံးခန်းကို ကိုင်ရိုမြို့လည်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးစားနေသလို၊ အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးတွေကလည်း အီဂျစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ အပမ်းဖြေစခန်းများတည်ရှိရာ မြို့လေးဆီကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။
နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ အလုပ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ရဲတွေရဲ့လခပိုမိုတိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုချီတက်သံတွေက ပြည့်နှက်နေဆဲ…….
“တော်လှန်ရေးဆိုတာ အန္တရာယ်တွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ မတည်ငြိမ်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လာတတ်တယ်။
ကဲ- အခုတော့ အဲ့ဒီ တော်လှန်ရေးတွေ ကျနော်တို့ရဲ့တံခါးပေါက်တည့်တည့်ကို ရောက်လာပြီ။ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ”
အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာ ငြင်းခုန်မှုတွေလျှံကျနေခဲ့တယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား ကတော့
ကိုင်ရိုမြို့မှာပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းကို ဂတိသစ္စာစောင့်သိခဲ့တယ်။ ၂၀၀၉ ဂျွန်လရဲ့ ကိုင်ရိုမြို့မိန့်ခွန်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဘရက်အိုဘားမားက အာရပ်ကမ္ဘာက မိတ်ဆွေတွေအပေါ် အချက် (၇) ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်။
“ လူတွေမှာ မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရာတွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေရှိရမယ်။
ခင်ဗျား ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ခံနေရတယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့တရားမျှတမှုအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို ခိုးယူခြင်းမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ ခင်ဗျားရွေးချယ်တဲ့ လွတ်မြောက်မှုတွေထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရမယ်
ဒါတွေဟာ အမေရိကန်အိုင်ဒီယာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
အိမ်ဖြူတော်အစည်းအဝေးတွေရဲ့ ငြင်းခုန်မှုတွေမှာ ဘရက်အိုဘားမား က တဘက်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က တဘက် မတူညီတဲ့အမြင်တွေကို ဖလှယ်ကြတယ်။ အိုဘားမား က အီဂျစ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဆက်လက်ဖွင့်ပေးထားဖို့လိုမယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုအတိုင်းလိုက်လျောပေးသင့်တယ် လို့ ထင်မြင်ပေမဲ့ ဂျိုးဘိုင်ဒန် တို့ အုပ်စုကတော့ စံနစ်တကျပြောင်းလဲမှုကို လိုလားတယ်။ “ပင်လယ်အောက်ခြေမှာ လှိုင်းတွေဝင်စောင့်နေပြီ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြိုတင်လုပ်တော့” ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို မိတ်ဆွေ အာရပ်နိုင်ငံတွေဆီ အကြံပေးတိုက်တွန်းတယ်။ အီဂျစ်လှုထုအုံကြွမှုဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတခုလုံးကို ရိုက်ခပ်နေပြီ ဆိုတာ သဘောပေါက်နေကြတယ်။
ဘရက်အိုဘားမားက လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား နဲ့
အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဆီကို သွားရောက်လည်ပတ်စေပြီး သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေ၊
(၁) အီဂျစ်တော်လှန်ရေးဟာ ၁၉၇၉ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အီရန်တော်လှန်ရေးလို ဦးတည်မယ်ဆိုရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံတခုတိုးလာမယ်။ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာနိုင်တယ်။
(၂) အီရန်တော်လှန်ရေးလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းဆီကို ဦးတည်သွားပြီဆိုရင် အဲ့ဒီအချက်ကို
ထောက်ပြပြီး အီရန်နိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင် ကို ဆက်လက်ဖြုတ်ချကြဖို့ လှုံ့ဆော်ကြရမယ်။
နောက်ထပ် စဉ်းစားရမဲ့အချက်တခုကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများ ကို စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပိုင်ဆိုင်ထားကြသလို၊ စစ်တပ် ဟာ အဂတိလိုက်စားမှု၊ ခြစားမှုတွေနဲ့ ပျက်စီးနေခဲ့တယ်။ သမိုင်းစဉ်တလျောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
အီဂျစ်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ဟာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ကစားခဲ့တယ်။ ဒါဖြင့် စစ်အရာရှိတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲ။ အီဂျစ် နိုင်ငံရဲ့ နှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှာ “ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ ” စံနစ်ဆိုတာ တိတိကျကျရှိခဲ့ရဲ့လား။ တိုးတက်ထွန်းကားနေတဲ့ အင်တာနက်နည်းပညာတွေဟာ အီဂျစ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်း လမ်းကြောင်းသစ်တခုဆီ သယ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိသေချာခဲ့သလဲ။ စမ်းသပ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရမဲ့
အရာတွေက အများသား။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးကို အထူးပြုလေ့လာသင်ကြားနေသူ ပါမောက္ခစတီဗင် ဇူးနက်စ် ကတော့ သူ့ရဲ့အမြင်တွေကို သုံးသပ်ပြခဲ့ဘူးတယ်။ သူကတော့ အီဂျစ်တော်လှန်ရေးဟာ အီရန်တော်လှန်ရေးနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး
ကွာခြားလွန်းပါတယ် တဲ့။ သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးထဲက အချက်အလက်တချို့ကို ယူသုံးရင်း ဒီတပတ် လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံရဲ့
အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း အစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့တတွေဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရေးဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေအောက်မှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
တချို့က အရမ်းချမ်းသာတယ်။ အကောင်းစားအိမ်တွေ၊ အကောင်းဆုံးကားတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဘဝတွေကို ဒုက္ခရောက်မဲ့လမ်းကြောင်းတခုပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့ကြတယ်။
ကျနော်တို့အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။
အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ဂူဂယ် အလုပ်မှုဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဝိုင်းလ်ဂိုနင်မ် (Wael Ghonim) ရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေက
တာရီရာ ရင်ပြင်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေဆီသာမက၊ အီဂျစ်လှုပ်ရှားမှုကို စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူအားလုံးရဲ့
ရင်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်ရမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုင်ရိုမြို့ရဲ့ သောကြာနေ့ ဘုရားဝတ်ပြုပွဲဆီမှာ ထောင်ချီနေတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ပိုမိုတိုးလို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး “ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကောင်းစားစေဖို့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့အသက်ကို ပေးဆပ်ဖို့
အသင့်ဖြစ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ လူငယ်ထုရဲ့အသံကလည်း သမိုင်းအချိုးအကွေ့တခုကို ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။
“ တချို့က အီဂျစ်ပြည်သူတွေရဲ့ ရုန်းကြွမှု ကို ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေကပဲ နောက်ကနေ အားပေးအားမြှောက်ပြု ချုပ်ကိုင်ထားသလိုလိုပြောဆိုနေကြပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သေးသိမ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ ၁၉၇၉ အီရန်တော်လှန်ရေးနဲ့
နှိုင်းယှဉ်ခြိမ်းခြောက်လေ့ရှိကြတယ်။ အီရန်နိုင်ငံမှာ ရှားဘုရင်ကိုဖြုတ်ချတုံးက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာ ပြည်ပကို
ထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ အရာတိုလာခိုမေနီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဆင့်ခေါ်ပြီး၊ အစိုးရကိုအခွန်မပေးဆောင်ကြဖို့၊ စက်ရုံတွေကို သပိတ်မှောက်ကြဖို့၊အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ အစ္စလာမ်
လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်လည်ကယ်တင်ကြဖို့..စတဲ့ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြည်ပကနေ လျှို့ဝှက်တင်သွင်းလာတဲ့ ကက်ဆက်တိတ်ခွေတွေထဲမှာ ဆန္ဒပြပွဲအတွက် အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေ၊ မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာ အကြံပြုချက်တွေပါသလို၊ အီရန်တော်လှန်ရေးရဲ့ ကြွေးကြော်သံ၊ ပိုစတာ တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေးတွေလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့ရမယ်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ အီရန်တော်လှန်ရေးဟာ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို (၁၃) လကြာစီစဉ်နိုင်ခဲ့အပြီးမှာတော့
“ အီဂျစ်လှုပ်ရှားမှု ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ပညာတတ်လူငယ်တွေက စတင်လှုံ့ဆော်ဦးစီးခဲ့တဲ့ အင်တာနက်တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကိုင်ဆောင်လာတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေ၊ လည်စီးတွေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေကလည်း လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ် နဲ့
အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ အသံတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးကြွေးကြော်သံတခုမှခဲ့ဘူး။
ပိုပြီး ထူးခြားတာကတော့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ အနှစ် (၃၀) လုံးလုံး မူဘာရက်အစိုးရကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့၊
အီဂျစ်လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်နေသူအားလုံးဟာ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံကို မပြုလုပ်ခဲ့ကြဘူး။
“ မူဘာရက်အနေနဲ့ချက်ခြင်းနှုတ်ထွက်ပေးရမယ်” ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုမှုကို၊အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားတယောက်၊
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖိအားပေး ထုတ်ပြောရသည်အထိ အီဂျစ်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေက လိမ္မာပါးနပ်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်”
တကယ်တော့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ၊ ခြစားအကျင့်ပျက်မှုတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းဆန့်ကျင်ရေးကို တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်နေသူတွေဟာ မူဘာရက် နဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူဘာရက် ဟာ အစ္စလာမ် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ချင်တဲ့ အခြေခံဝါဒီတွေနဲ့
တိတ်တဆိတ်အပေးအယူလုပ်ကိုင်ပြီး၊အစိုးရဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေမှာ ဘာသာရေးသင်ကြားမှုအစီအစဉ်တွေကို ပိုမိုတိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်
လာခဲ့ပါတယ်။ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီသမားများနဲ့ လက်ဝဲဝါဒီများကို အီဂျစ်လှု့အဖွဲ့အစည်းမှ ရှင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကိုဝေဖန်ဆန့်ကျင်တဲ့ ပညာတတ်တွေကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်အဆက်အသွယ်ရှိသူများလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး၊
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြမ်းဖက်သမားများအပေါ်စစ်ဆင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်တွေအပေါ် အမြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“ အီရန်တော်လှန်ရေးနဲ့အထင်ရှားဆုံးကွာခြားချက်တခုကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံဟာ ၁၉ ရာစုကတည်းက လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေ
ထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အရာတိုလာခိုမေနီလို ရှီးယားမွတ်စလင်တွေအပေါ် ဘာသာရေးအရ၊ သြဇာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမျိုး အီဂျစ်မှာမရှိဘူး။ ဆွန်နီမွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်။ အီဂျစ်ရဲ့အဓိကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဆီက ရတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပြီး၊
ကုန်သည်လူတန်းစားဟာ ပညာတတ်အလွှာတွေဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေလိုတိုးတက်ထွန်းကားချင်သူတွေဖြစ်တယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတုံးကလည်း တပါတီအာဏာရှင်စံနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ စံနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်။
လူလတ်တန်းစားတွေထွန်းကားလာခဲ့တဲ့အတွက်၊ ပညာတတ်လူငယ်တွေ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ လယ်သမားသမဂ္ဂတွေရဲ့
အခန်းကဏ္ဍကလည်း ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဧပြီ (၆) ရက်လူငယ်ထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ( လုံလောက်ပြီ) လို့
ခေါ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုမှာပါဝင်ဦးဆောင်နေသူတွေဟာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူထုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စား
သူတွေဖြစ်တယ်။ အသက် (၃၀) အောက်လူငယ်တွေဟာ သူတို့ခေတ်မှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ လိင်ကိစ္စ နဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ပိုမိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ အတွက် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေက သူတို့ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အဖွဲ့ဝင် (တသိန်း) ကျော်လောက်ရှိတဲ့ မွတ်စလင်ညီအကိုတော်များအဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ နဂိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘာသာရေးအမြင် ချည်းကပ်မှုတွေကို ခေတ်ပေါ်လူငယ်ထုနဲ့လိုက်ဖက်နိုင်မဲ့ မူဝါဒတွေအဖြစ်
ပျော့ပြောင်းညင်သာစွာ အသွင်ကူးပြောင်းလိုက်ရတယ်။ လူငယ်ထုကို နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေဖြန့်ဖြူးခဲ့သလို၊ လူငယ်ထုရဲ့အသံတွေကလည်း သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေ၊ နည်းဗျူဟာအသစ်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်”
သံချပ်ကာတင့်ကားတွေ၊ လူထုနှိ်မ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့တွေက လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခွင့်၊ တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်၊ ဘဝလုံခြုံခွင့်ကို အာသာငမ်းငမ်းတောင့်တနေတဲ့ လူငယ်တွေ ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ခြေမှုန်းပစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
“ တိုင်းပြည်အတွက် စိုးရိမ်နေသူတွေကို ဘာလို့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်ထားတာလဲ” တဲ့။
မူဘာရက်အတွက် အာဏာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်အထိ ပြင်းထန်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
သောတရှင်တို့လည်း အိပ်မက်တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းထုဆစ်နိုင်ကြပါစေ။
U.S. Department of State - Permanent Resident Card for kyaw kyaw
အမေရိကန် DV ပေါက်တယ်ဆိုပြီး ဒိအတိုင်းစာလာတတ်ပါတယ်... မဟုတ်ပါဘူးနော်...သံတူကြောင်းကွဲလေးလုပ်ထားတာပါ..နောက်ပြီးဒိနှစ်က စလို့ မဲပေါက်ရင်တောင် အကြောင်းကြားစာကို စာနဲ့မပို့တော့ပါဘူးဗျာ... လျောက်လွာတင်တုံးက ပေးထားတဲ့ ပါစ့်ဝေါ့လေးနဲ့http://www.dvlottery.state.gov/
အထက်ပါ လင့်လေးကနေ ပြီးတော့ မဲပေါက်သလားမပေါက်လားဆိုတာကို ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ိနိုင်ငံခြားမှာနေသူများ မိမိအားဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များပေးမိပါက မကြာခင် အင်တာနက်ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြိးပိုက်ဆံတောင်းတတ်ပါတယ်..ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားသူတစ်ဥိးရဲ့ နံပါတ်ကို စကင်ဖတ်ပြိးတော့အင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းနဲ့ခေါ်တတ်ပါတယ်..( ကိုယ့်ဖုန်းမှာ နံပါတ်တစ်ခုပေါ်နေပေမယ့် ကိုယ်က ပြန်ခေါ်ရင် ခေါ်လို့မရပါဘူး ..နံပါတ်မသံူးဘူး ဆက်သွယ်မှု အပြင်ေ၇ာက်နေတယ်အစရှိသဖြင့် ကြား၇မှာဖြစ်ပါတယ်...)
အဲဒိ အမေ၇ိကန်ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ သုံးတဲ့အင်တာနက် ဆိုဒ်တွေ ဟာ .com တို့ .org တို့.net တို့မသုံးပါဘူး......ခင်ဗျား
အမေရိကန်အစိုးရတရားဝင်သုံးတာက state.gov သာ ဖြစ်ကြောင်းပါ.........
ကဲ ရတဲ့သူက ဆက်ဖြန့်လိုက်ပါအုံး
Honorary Degree for Aung San Suu Kyi
Tel: 613-520-2600 ext. 3636
Carleton University alumni are invited to attend an honorary degree ceremony to celebrate the conferral ofaDoctor of Laws, honoris causa in absentia, upon Aung San Suu Kyi, the pro-democracy Myanmar leader, Nobel laureate and winner of the Mahatma Gandhi Peace Award.
The ceremony will take place at noon on Tuesday, Feb. 22 in the Kailash Mital Theatre, where the Hon. Flora MacDonald, PC, CC, O.Ont, ONS, will deliver an address.
Aung San Suu Kyi has been placed under house arrest in Myanmar on numerous occasions since she began her political career. She was finally released last November.
Please RSVP to events_office@carleton.ca or call (613) 520-2948.
Parking available in Lot P1.
All rights reserved. Carleton University © 2011
This email has been sent to hmar@connect.carleton.ca by Carleton University.
Click here to manage your contact preferences
နယူးယောက်မြို့ ၀ုဒ်ဆိုက်ကျောင်းဝင်းမှာ ကျင်းပမယ်...
စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှ...
အိမ်ရှေ့တခါးဝမှာ ရောက်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးလှိုင်းများ(...
U.S. Department of State - Permanent Resident Card...
The Impact of People's Tribunals: Reflecting on th...